Politika | VAOVAO FOTOTRA
in amin'izao fotoana izao, Aotrisy, politika
Ny horonan-tsary Ibiza sy ny minitra an'ny komity mpanadihady
in amin'izao fotoana izao, Germany, Initiatives sy fangatahana, politika
Greenpeace: antony 5 manohitra ny fifanarahana EU Mercosur
in amin'izao fotoana izao, politika, Videos
LAHATSORATRA FAHAROA ORBAN - Ahoana no tokony handraisan'ny Vondrona Eropeana? - resaka video
Trosa maneran-tany: iza no tompona izao tontolo izao?
in politika, manan-danja
Mandainga ve ny mpanao politika?
Atlas an'ny plastika - Ny lalànan'ny ankamaroany dia maniry ny fandrarana sy ny adidy amin'ny orinasa
in Aotrisy, politika, foiben'ny hery misintona, Torohevitra video, Videos, manan-danja
Ny demaokraty ara-tsosialy sy ny fanjakana manasoa ny tena
Fanjakana sy demokrasia manerantany
in orinasa, politika
Inona no mampifaly ny Danes?
in politika, siansa
Lobbying 4.0: Miady amin'ny fenitra
in Toekarena hafa, orinasa, politika
Politika amin'ny maika ny fahefana
Clicktivism - fandraisan'anjara amin'ny tsindrio
Ny mpanao politika homo na mpanao politika mety
Fampivoarana - ny fampahalalana namboarina
Ohatrinona ny fangaraharahan'ny demokrasia?
Fiarahamonim-pirenena - lakaoly ny demokrasia
Demaokrasia momba ny alikaola: Ny pôlitika amin'ny alikaola
Fahazavana: eo ambany fijerin'ny tsiambaratelo ofisialy
Fisarahana fahefana vaovao: fotoana fanarenana ny fahefana
Demaokrasia mivantana: fotoana lehibe hanala ny demokrasia
Demaokrasia mivantana: Eoropa amin'ny sampanan-dalana iray